ရက်စွဲလေးကို စတိုင်တမျိုးနဲ့ချိန်းရအောင် [Tips & Tricks]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Window Registry » ရက်စွဲလေးကို စတိုင်တမျိုးနဲ့ချိန်းရအောင် [Tips & Tricks]
1 ရက်စွဲလေးကို စတိုင်တမျိုးနဲ့ချိန်းရအောင် [Tips & Tricks] on 26th July 2010, 3:55 am
By ဖိုးသား |
နာရီပေါ် mouse pointer လေးတင်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူနာမည် (သို့)
panel\_International\_slong Date ကို ရှာပြီးDOUBLE-
2 Re: ရက်စွဲလေးကို စတိုင်တမျိုးနဲ့ချိန်းရအောင် [Tips & Tricks] on 26th July 2010, 10:40 pm
ဒီနေရာကနေ ပေါင်းပြီး တစ်ခါတည်း အသိပေးလိုက်ပါမယ်...
Post တွေက Blog ကနေ ကူးယူလာတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
၁- ခေါင်းစဉ်တွေ စာတွေမှာ "Space" ခြားပါ။ (မြန်မာစာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ရေးရင် အဖြတ်အတောက်နဲ့ ရေးရပါတယ်။ မမှန်ရင်တောင် ခြားပေးပါ)
၂- Link များကို Share မည်ဆိုက Code ခံရန် စည်းကမ်းရှိပါတယ်။ စ၀င်ဝင်ချင်းကတည်းက ဖတ်ပြီး သိသင့်ပါတယ်။
၃- မိမိရဲ့ ပုံများဟာ ကြည့်ရ အဆင်ပြေ ၊ မပြေကို သေချာစွာ စစ်ဆေးပြီးမှ တင်စေချင်ပါတယ်။ Blog မှာ တင်ထားတဲ့အတွက် အချို့သော ပြည်တွင်း IP တွေမှာ အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်။
၄- Blog ကြော်ငြာပုံစံဖြင့် Link အားထည့်ထည့်ရေးသားနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ Blog Name ကို Signature တွင် ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားသည့် Post တိုင်းတွင် ဖော်ပြရန် လိုမည်မထင်ပါ။
3 Re: ရက်စွဲလေးကို စတိုင်တမျိုးနဲ့ချိန်းရအောင် [Tips & Tricks] on 27th July 2010, 11:20 am
တမျိူးတော့ မထင်နဲ့ ဗျာ ကျတော် တခုလောက် အကြံပေးချင်တယ်
ညီလေး $ƴǩǾ ရေ
ကိုလည်း ဒီဖိုရမ်ကို ရေးမယ် အားပြုပီးမှ စာတန်းပြုစုနေလို့
မရေးဖြစ်ဘူး ညီလေးတို့ ဖိုရမ်မှာ ရေးနေတယ် ဆိုတာ မြန်မာတွေ နားလည်ဖို့မဟုတ်လား
အဲတော့ ရေးပီးတင်ပီဆိုရင်တော့ မြန်မာလိုလေး နည်းနည်း ဘာသာပြန်ပီး ပိုကောင်းအောင်တင်စေချင်တယ်
အဲတာမှ မြန်မာတွေ တဖြေးဖြေးနဲ့ ဖိုရမ်ကို ပိုစိတ်ဝင်စားလာမယ် ထင်လို့ပါ ခု
ကို တွေ့နေတာ က အင်္ဂလိပ်ဖိုရမ်က နေ ယူပီး ဒီတိုင်းတင်နေတာတွေ ကို တွေ့ လို့
အကြံပေးတာ မှားသွားရင် ဖြတ်ပစ်နိင်ပါတယ်
4 Re: ရက်စွဲလေးကို စတိုင်တမျိုးနဲ့ချိန်းရအောင် [Tips & Tricks] on 27th July 2010, 3:38 pm
5 Re: ရက်စွဲလေးကို စတိုင်တမျိုးနဲ့ချိန်းရအောင် [Tips & Tricks] on 27th July 2010, 4:46 pm
ကိုနေဦးသစ်ပြောတာနှင့် ကျနော်ရဲ့ copy and paste အကျင့်လေး လဲ ပြင်မှပဲလေ [You must be registered and logged in to see this image.]
6 Re: ရက်စွဲလေးကို စတိုင်တမျိုးနဲ့ချိန်းရအောင် [Tips & Tricks] on 28th July 2010, 5:04 pm
ကျွန်တော့် နာမည်တပ်ပြောတာဆိုတော့ ၊ ကျွန်တော်ရေးတာတွေ ပြောတာထင်တယ်နော့်။
ပြီးတော့ ကျွန်တော် ကူးထားတာကလည်း ဘယ်ဟာတွေ ဆိုတာ တန်းသိပါတယ်။ (ရှင်းရပေါင်းလည်း အတော်များပီ)
Forum စစချင်းလုပ်တုန်းက တင်ထားတဲ့ Hacking or Security Post တွေကလွဲရင် ကျန်တာအားလုံး မြန်မာလိုဘဲ ကိုယ်တိုင် ရေးတင်ထားပါတယ်။ ဘာသာပြန်တယ်ဆိုတာတောင် ခပ်ရှားရှားရယ်။ ကိုယ်တိုင်သိတာကိုမှ ရေးတင်တာဘဲ များပါတယ်။
Hacking ပိုစ့်တွေကလည်း အဲတုန်းက ရေးစရာမရှိတာကော ၊ အားရင် ဘာသာပြန်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ ရည်ရွယ်ပြီး တင်လိုက်တာ။ အခု MITR 2.0 ပြောင်းရင် အဲ Post တွေလည်း ဖျက်ပစ်မှာ။ =)
ဒါနဲ့ အစ်ကိုရေ အစ်ကို တွေ့တွေ့နေတာဆိုတော့ ၊ ကျွန်တော် ခုတလော (တော်တော်တောင် ကြာပါပြီ) စာမရေးတာ။
ကျွန်တော် ထင်တဲ့ Post တွေ မဟုတ်ရင် ၊ ဘယ် Post တွေ ဆိုတာ ပြောပြပေးပါအစ်ကိုရေ။
စိတ်တိုင်းကျ ပြောင်းလဲပေးလိုက်ချင်ပေမယ့် ၊ ပြောင်းလဲပေးမယ်လုပ်တိုင်း မတန်သေးဘူးထင်နေမိတယ်။
7 Re: ရက်စွဲလေးကို စတိုင်တမျိုးနဲ့ချိန်းရအောင် [Tips & Tricks] on 29th July 2010, 10:18 am
$ƴǩǾ wrote: @ကို နေဦးသစ်
မဟုတ် ဘူး ညီလေး ရေ
ကိုပြောတာက ညီလေးက ဖိုရမ်ကို ကြီးကြပ်သူအနေနဲ့ဆိုတော့
ညီလေး လိုက်ပီးတော့တားမြစ်ပေးဖို့နဲ့
ညီလေး ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပီး ကြီးကြပ်စေချင်လို့ကိုပြောပြတာပါ ညီလေးကို
ဒီတိုင်းတင်နေတဲ့ သူတွေ အများကြီး တွေ့ပါတယ်
ဥပမာ ကိုပြောမယ် ကွာ သားသမီး မကောင်း မိဘ ခေါင်းတဲ့
အဲတော့ ညီလေး ကို ပြောရင် အကုန်လိုက်ညှိနိင်လိမ့်မယ်လို့
ထင်လို့ ညီလေးကို ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်တာ ပါ ညီလေး ရေ
ကိုရေးတာ မှား သွားရင် စောရီးနော်
8 Re: ရက်စွဲလေးကို စတိုင်တမျိုးနဲ့ချိန်းရအောင် [Tips & Tricks] on 29th July 2010, 10:41 am
အဟဲ ၊ အဲဒါကတော့ ဘယ်လိုပြောမလဲခင်ဗျ။
ဖိုရမ် စ၀င်ဝင်ချင်းကတည်းက စည်းကမ်းလေးတွေ လုပ်ပေးထားပါတယ်။
Code ခံပါဆိုတာတောင် မခံနိုင် ၊ Tag တပ်ပါဆိုတာလည်း မတပ်နိုင်နဲ့တော့ ၊ ဘယ်လိုလုပ်မလဲခင်ဗျ။
အခြေခံသေးသေးလေးတွေတောင် မနိုင်တာ ၊ ဘာသာပြန်ပြီးမှ တင်ဖို့ဆိုရင် ဘယ်သူမှ လုပ်မှာ မဟုတ်ပါ။
ပြီးတော့ တစ်ယောက်ထဲက အကုန်လိုက်ထိန်းနေရင်လည်း ကျွန်တော် အလုပ်ပျက်ရုံဘဲ ရှိတော့မယ်...
သားသမီးမကောင်း မိဘခေါင်းဆိုတာထက် ၊ ဒီနေရာမှာ နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။
နိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူက ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်ချင် ၊ သူ့လက်အောက်က တပည့် ၊ သူ့နိုင်ငံတွင်းက ပြည်သူတွေက စည်းကမ်းမရှိ ၊ စေတနာ နားမလည်ဘူးဆိုရင် ၊ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အုပ်ချုပ်သူက မြို့ထဲကိုဆင်း ၊ တစ်ယောက်ချင်းဆီကို ဒါမလုပ်ပါနဲ့လို့ ပြောလည်းမရဘူးလေ။ စည်းကမ်းကြီးထုတ်လည်း ထုတ်ထုတ်ဘဲ။ နဂိုတည်းက စည်းကမ်းမရှိတဲ့သူတွေဆိုတော့ ၊ ဖတ်တောင်ကြည့်မိမှာ မဟုတ်ဘူးရယ်။
ဒီလောက်ပါဘဲ။ ကိုယ့်လူမျိုးကို အားမရမိတာတွေလည်း အများကြီး..
9 Re: ရက်စွဲလေးကို စတိုင်တမျိုးနဲ့ချိန်းရအောင် [Tips & Tricks] on 15th August 2010, 12:59 pm
ကျွန်တော်နာမည်က အောင်စံဇြိုးပါ ကျွန်တော် အကူအညီတင်တဲ့ စာတွေမှာကော Tag တွေတပ်ရမှာလားမသိဘူးဗျ . . ကျွန်တော် က လောလောနဲ့ တင်မိတော့ အစ်ကိုတို့ရဲ့ စည်းကမ်းတွေကို
မဖတ်ရသေးလို့ပါ အမှားရင်တော့ခွင့်လွတ်ပါဗျာ . .ကျွန်တော်လဲ လေ့လာဆဲတစ်ယောက်မို့ပါ
10 Re: ရက်စွဲလေးကို စတိုင်တမျိုးနဲ့ချိန်းရအောင် [Tips & Tricks] on 15th August 2010, 1:55 pm
MITR ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ အသင်းဝင်တိုင်းဟာ တတ်ကျွမ်းတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်
ဖိုရမ်ဆိုတာလုံးဝနားမလည်သေးဘူး မသုံးတတ်သေးဘူးဆိုတဲ့ လူတွေလည်းပါတယ်
တစ်ချို့ကြတော့ ကိုယ်နဲ့သိပြီး လာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်
ကျနေ်ာတို့ MITR ရောက်တဲ့အခါ အကူညီလိုတာတွေရှိမယ်
စာရေးပြီးတော့တော့ သူတို့ပြောချင်တာပဲ ဥိးစားပေးပြီးမေးလိုက်တယ်
Mob တွေလိုက်ကြည့်ပြီး ပြင်သင့်တာပြင်ဆင်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိူပါ စည်းကမ်းချက်မှာပြန်ကြည့်ဖို့ ပြောခဲ့ပါတယ်
လူတော်တော်များများ အသင်ဝင်လူုပ်တဲ့အခါ MITR က ထုတ်တဲ့ဖိုရမ်က စည်းကမ်းချက်တွေကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူး
နောက်ပိုင်းအချိန်ရမှ စည်းကမ်းချက်တွေကို ဖတ်တာလောက်ပဲရှိတယ်
MITR ဖိုရမ်က မြန်မာတွေအတွက် နားလည်ဖို့ရေးတာလားဆိုတော့
ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီလေ့လာနေတဲ့မြန်မာတွေက အင်္ဂလိပ်စာနည်းနည်းပါပါးဖတ်ပြီး လုပ်ကြည့်လို့မရဘူးလား
လိုအပ်ရင် Dict; သုံးပြိးကြည့်လို့ရပါတယ်
အခြေခံအဆင့်ကလူက ဟိုအပေါ်ထိ တက်ကြည့်လို့မရနိုင်ဘူးလေ
တစ်ဆင့်ပြိးတစ်ဆင့် အခေါ်အဝေါ်တွေကိုနားလည်ပြိးမှ တတ်လာမှာလေ
အင်္ဂလိပ်စာပဲရေးထားတယ် ငါလေ့လာဖို့ခက်တယ်ဆိုပြီးမလေ့လာရင် တတ်မှာမဟုတ်ဘူး
တစ်ခြားနိုင်ငံကလည်း ကျနေ်ာတို့ MITR ကို Gest နဲ့ ၀င်ကြည့်ကြတယ်
မြန်မာလိုမဖတ်တတ်တော့ ဘယ်လိုဝင်ဆွေးနွေးမလဲ၊ ဘယ်လိုဝေမျှမလဲ?
နည်းနည်းလောက်တော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါဦး
မြန်မာတွေလေ့လာလို့အဆင်ပြေအောင်လည်း Founder အနေနဲ့ကြိုးစားနေတာပါပဲ
11 Re: ရက်စွဲလေးကို စတိုင်တမျိုးနဲ့ချိန်းရအောင် [Tips & Tricks] on 16th August 2010, 12:21 am
ET wrote:်
ET ရေ ညီလေး အခြေခံ အဆင့်ကို စတက်တုန်းက ကွန်ပျုတာကို စလေ့လာတုန်းက Eng လိုချည့်းဆိုရင် တော့
ကိုပြောတာ မှားတယ် လို့ ကိုဝင်ခံပါတယ်
ညီလေး ကွံန်ပျုတာ စလေ့လာတုန်းက မြန်မာလို့ရော Eng လို ရော ဆိုရင်တော့ ကိုပြောတာ မမှားဘူးထင်တယ်
ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ညီလေး ကို ကွန်ပျုတာကို လေ့လာလာတာ ၅ နှစ်ကျော်ပီ ဒီဖိုရမ်မှာ သဘောကျလို့ ၀င်ရေးခဲ့တာပါ
ကိုက မြန်မာလို့ များများရေးမှ မြန်မာတွေ များများဖတ်မှာ ကိုက Eng လို့ မရေးရဘူးလို့ မပြောဘူး
မြန်မာစာနဲ့ တွဲဘက်ရေးဖို့ပြောတာပါ မြန်မာတွေ က တုံးတယ်
တည့်တည့်ပြောတာ ကိုယ်ကိုတိုင်က မြန်မာ မှာ နေတာ မဟုတ်လို့ လို့ ညီလေးတို့က ပြောဦးမယ် ဘယ်မှာနေနေ မြန်မာ လူမျိုးက
မြန်မာ စာ ဖတ်ရတာကို ပဲ သဘောကျတယ် ဥပမာ တိုးတက်နေတဲ့ ဖိုရမ်တွေ ကို ကြည့်လိုက်
ဒီစာကိုရေးလို့ ဖိုရမ်စည်းကမ်းဖောက်တယ် ထင်ရင် ဖျုက်ပါလိုက်နိင်တယ် ဒီလို မြန်မာ လို့ ရေးစေချင်တဲ့ သဘောကလည်း
ဖိုရမ်ကို တိုးတက်စေချင်လို့ ပြောလိုက်တာ
လိုက်ပုတ်ခပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးး တယောက်နဲ့ တယောက်
ဖိုရမ်ဆိုတာ နောင်တချိန်မှာ မြန်မာတွေ တွက် အားဆေးပဲ
တခုတော့ ပြောချင်တယ် ကွာ မြန်မာ လူမျိုးဆိုပေ့မယ် English စကားပြောနေတဲ့ လူတယောက်က မြန်မာ
လို့ ရေးပါလို့ ဖိုရမ်မှာ ၀င်ရေးတာ ကိုယ့်သိက္ခာ ကျမှန်းသိတယ် အဲလို ပြောလိုက်တာကလည်း
ဖိုရမ်ကို တိုးတက်စေချင်လို့ ဆိုတာ တော့ အားလုံးနားလည်သင့်တယ်
အကောင့် [You must be registered and logged in to see this link.]
12 Re: ရက်စွဲလေးကို စတိုင်တမျိုးနဲ့ချိန်းရအောင် [Tips & Tricks] on 16th August 2010, 9:23 am
ဘယ်နေရာမှာနေနေ မြန်မာလူမျိုးက မြန်မာလူမျိုးပါ
မြန်မာလို့ များများရေးမှ မြန်မာတွေ များများဖတ်မှာ
ဘယ်ဖိုရမ်မဆို မြန်မာစာကိုဖတ်ရမှ ရေးရမှ အားရတယ်ဆိုတာလည်း မှန်ပါတယ်
အင်္ဂလိပ်စာတွေ့ရင် လက်တွန့်နေတယ်။ လက်တွန့်နေတယ်ဆိုတာကလည်း သူတို့ကိုယ်တိုင်က အားနည်းတယ်
မြန်မာပြည်မှာ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နည်းပညာအသစ်တွေရဲ့မြန်မာလိုစာအုပ်ကောင်းတွေရှားပါတယ်
ကျနေ်ာတို့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေကို ဒေါင်းလော့ဆွဲ ဖတ်တယ် ပြန်လည်ဝေမျှကြတယ်.....
ဝေမျှတဲ့အခါ အချိန်ပေးနိုင်ရင်တော့ တတ်နိုင်သလောက် နားလည်းသိတတ်သလိုပြန် Share ပါတယ်
ကွန်ပျူတာစသင်တုန်းက စာအုပ်က အင်္ဂလိပ်လိုပဲ
အခြေခံကသင်ရင်တော့ အဂ်လိပ်စာကိုဆရာက တစ်ကြောင်းရှင်းပြ တပည့်က ရှင်းပြတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်
မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများက ငှက်ပျော်သီးအခွံနွာကျွေးတာတောင် မယူတတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်
နောက်ပိုင်း ဘယ်ပညာမဆိုလေ့လာရင် ငှက်ပျော်သီးအဆင့်သင့်ခွာပြိးပေးမဲ့လူမရှိရင် သူဘယ်လိုနားလည်နိုင်တော့မလဲ....... ကျနေ်ာတို့ အဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူး
MITR မှာ အခြေခံအဆင့်တွေကို မြန်မာလိုပဲရေးကြတာများပါတယ်ဝင်ရှာကြည့်ပါဦး
ကျနေ်ာအခုပြောနေတာက ကိုနေဦးသစ်နဲ့ နည်းနည်းနားလည်မှုလွဲနေလို့ပါ
ကိုနေဦးသစ်တို့လို ဖိုရမ်အတွက် အကျိုးဆောင်ပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
13 Re: ရက်စွဲလေးကို စတိုင်တမျိုးနဲ့ချိန်းရအောင် [Tips & Tricks]